မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: ပါတီမူဝါဒ
( Myanmar Democracy Congress )
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်သည်.ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံ၏ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး သည်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားများ၏မွေးရာပါလူ.အခွင့်အရေး ပြည်.၀စွာရှိခံစားနိုင်ရေးသည်လည်းကောင်း နိုင်ငံသားတို.အတွက်ဘ၀အာမခံချက်အပြည်.အ၀ရှိသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာမူ ၀ါဒများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ အစရှိသည်တို.ကို စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်နိုင် ရေးသည်လည်းကောင်း နိုင်ငံသားအားလုံး၌တာဝန်ရှိကြသည်။၄င်းကိစ္စအ၀၀ကိုဆောင်ရွက်ရာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျဖြင့် အုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဖြင့်သာအောင်မြင်ဖြစ် ထွန်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစွာပြသလိုသည်သာမက မြန်မာနိုင်ငံသားတို.သည်ဤဒီမိုကရေစီရေးအ တွက်ချစ်ကြည်စွာစုရုံးလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်ဟုရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်၍ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ဟုခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်ဆိုသည်မှာ ဒီမိုကရေစီရေးကိုစုပေါင်းယုံကြည်သူများဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည် ။ “မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်"ဟုဆိုခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအရေးကို ယုံ ကြည်သူများ စုပေါင်းဖွဲ.စည်းထားသည်. ဒီမိုကရေစီစွမ်းအားစုကြီးဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
၁။ နိုင်ငံရေးပါတီဆိုသည်မှာ တိုင်းပြည်၏ အရင်းအမြစ် တစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို.ကယုံကြည်သည် နိုင် ငံရေးပါတီကောင်းတစ်ရပ်မရှိပဲ တိုင်းပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီမရှိနိုင်၊ နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသော လူသားအ ရင်းအမြစ်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းစပ်မှသာ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ယူဆသည်.အ လျှောက် မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ကို တည်ထောင်သည်။
၂။ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် သည် မြန်မာပြည်ထောင်စုသူ ပြည်ထောင်စုသားများ အား ဒီမိုက ရေစီ အခွင့်အရေး အပြည်.အ၀ ခံစားရရှိနိုင်ရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ ဒီမိုကရေစီဟုဆိုခြင်း၌ နိုင်ငံတွင် အချုပ်အခြာ အာဏာသည် ပြည်သူလူထု ၌ တည်၍ အာဏာဟူသမျှ လူ ထုထံမှ ဆင်းသက်ရသောစနစ်ကို ဆိုလိုသည်။
ပြည်သူလူထုသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ကင်းကွာသည်.အတွက် လူ.အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးရသည်။ လွတ်လပ်မှု ကင်းမဲ.သော စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခ ၊ ခေတ်မမီ ရုပ်ဝတ္ထုမပြည်.စုံသော ကိုယ်၏ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခ များကြုံတွေ.ရသည်။
မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ကယုံကြည်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် လွတ် လပ်ခြင်း ၊ တရားမျှတခြင်း ၊ ညီမျှခြင်းတည်းဟူသော လောကပါလတရား များထွန်းကားကျင့်သုံးနိုင်ရေး ၊ နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်မှု ၊ စီးပွားရေးလွတ်လပ်မှု ၊ တရားစီရင်ရေးတွင် လွတ်လပ်မှု ၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးတော ကြံဆနိုင်မှု ၊ လွတ်လပ်စွားဟောပြောစည်းရုံးနိုင်မှု စသည့်လွပ်လပ်မှု အခြေခံလူ. အခွင့်အရေးများကို ပြည် သူတို. အပြည်.အ၀ ခံစားနိုင်ကြရန်ဖြစ်သည်။
၃။ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် သည်ဖေါ်ပြပါ အခြေခံမူအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထု အကြား ဆင်းရဲမွဲတေမှုများ ပပျောက်စေရေးနှင့် အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ရာဝယ် ကျင့်သုံး မည်.အသေးစိတ်မူဝါဒများကို အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြအပ်သည်။
(က) လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင်.သုံးမည်။
(ခ) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုများ၊ နည်းပညာများ တိုးတက်စေ ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာဆက် ဆံရေး အ ခန်းကဏ္ဍသစ် ဖွင့်လှစ်ကာ ဆောင်ရွက်မည်။
(ဂ) အသေးစား၊ အလတ်စား၊ အကြီးစားစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပ ညာနှင့် ကုန်ထုပ်အရင်းအနှီးများ ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဈေးကွက်များ တိုးတက်ရရှိစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(ဃ) နိုင်ငံနှင့်အ၀ှမ်းအလုပ်လုပ်နိုင်သူကာယဥာဏလုပ်သားများအတွက်ဘ၀အာမခံချက်အပြည်အပေး နိုင်
သော အလုပ်အကိုင်သစ်များဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(င) စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၌ လွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုးထုပ်လုပ်ရောင်းချပိုင်ခွင့်စနစ်ကိုကျင့်သုံးမည်။
(စ) စိုက်ပျိုးမြေအရပ်ရပ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားမျှတသော မြေယာဥပဒေများ ပေါ်ထွန်းလာစေ ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(ဆ) အသားအရောင်ခွဲခြားမှု ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ၊ ဘာသာရေးခွဲခြားမှုများကို ပြတ်သားစွာတိုက်ဖျက်သွား မည်။
(ဇ) တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို.၏ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့် ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာပေ ၊ ဘာသာစ ကား ၊ ဓလေ့ထုံးစံများ ၊ ဂီတ နှင့် ပွဲတော်ကျင်းပမှုများ ၊ အစားအသောက်နှင့် အထိမ်း အမှတ် အသုံးအ ဆောင်ပစ္စည်းများ ၊ ရိုးရာဆေးဝါးကုသမှု ၊ ကိုယ်ခံပညာနှင့် အားကစားပညာများ ၊ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် များကိုထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သွားမည်။
( ဈ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို.၏ ဒေသများရှိ သယံဇာတ ၊ မြေယာ ၊ အပန်းဖြေ လေ့လာရေး ဒေသများမှ ထွက်ရှိသော ၊ ရရှိသော ထွက်ကုန်များ ၊ အခွန်အခမျာ ကိုထို ဒေသများ၏ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက် ရေး အတွက် အဓိက ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်။
(ည) ပညာရေးကဏ္ဍတွင် မူလတန်းအဆင့်မှသည် တက္ကသိုလ် ပညာရေးအဆင့် ၊ ဘွဲ.လွန်နှင့် ပါရဂူအ ဆင့်များ အထိလည်းကောင်း ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်းများသည် လည်းကောင်း ၊ သက်ကြီးပညာသင်ကြား ရေးစနစ်သည် လည်းကောင်း နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်း အဆင့်မီနိုင် ရေးအတွက် အထူးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်။
(ဋ) လူတိုင်းဆေးဝါး ကုသမှု ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို ရရှိနိုင်စေရမည်။
(ဌ) အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များ အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ရေး ၊ မတရားအခိုင်းအစေ ခံရမှုမှ ကာကွယ် ရေးအတွက်အထူးဆောင်ရွက်သွားမည်။
၃။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အမျိုးသားအချင်းချင်း အညီအညွတ်ငြိမ်းချမ်းစွာ လက်တွဲနေ ထိုင်ရေးသည် နိုင်ငံတော်ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အချက်အခြားကျပါသည်။ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကို အမှန်တကယ်ကျေးဇူးပြုနိုင်သဖြင့် ထိုမူကို မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် က အ လေးအနက်ထား၍ အောင်မြင်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်။
၄။ ယနေ.ခေတ်စနစ်သစ်ဖြစ်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်သစ်ဆီသို. အကူးအပြောင်းကာလတွင် ပြည် တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်စနစ်တကျ သုံးသပ်အဖြေရှာကြရပေမည်။ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက် ခြင်းနှင့်အရေးအခင်းများသည် တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက် အပြစ်များကိုသာရှာဖွေနေရုံနှင့်အဖြေမရနိုင်။ တစ် မျိုးသားလုံးအေးအတူပူအမျှ အတူတကွလက်တွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရေးအတွက် မိမိတို.သည် တစ်နိုင်ငံ တည်းသားများဖြစ်ကြသည်ဟူသော မိသားစုစိတ်ဓါတ်များထားရှိရန်လိုအပ်ပေသည်။
၅။ လွတ်လပ်ရေးမတိုင်မီခေတ်ကတည်းက ပင်တိုင်းရင်းသားများ ညီညွတ်ခြင်းအားဖြင့် လွတ်လပ် ရေးကိုအရယူနိုင်ကြောင်း ပင်လုံညီလာခံက သက်သေပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျင့်သုံးရပ်တည်ခဲ.သော တိုင်းရင်းသားအားလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ. သည်.စည်းရုံးရေးမူဝါဒများကို ဆက်လက်အမှီပြု ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
၆။ ပါတီဂိုဏ်းဂဏ၀ါဒ၊ လူမျိုးရေးဂိုဏ်းဂဏ၀ါဒ အစွဲများကြောင့် အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းများကွဲကြရ ကာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကို နောက်ထပ်တဖန် ခေတ်နောက်ကျကျန်ရစ်ပြန်စေခြင်းကို လက်မခံနိုင် တော့ပါ။ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ညီညွတ်သောစိတ်များ ပျက်ပြယ်စေမည်. တရားသေအယူအဆများကို ဆုပ်ကိုင်ထားရန်မသင့်တော့ပါ။ ဖွဲ.စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲရန် အခွင့်အလန်း ပေါ်လာ သည်.အခါ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံလက်ခံနိုင်သည်. အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို နိုင်ငံရေးနည်းအားဖြင့်ဆောင် ကျဉ်းယူလာစေမည်။
၇။ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များနှင့်အညီ လူထုလူတန်းစားအဖွဲ.အစည်းများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ.အစည်းများ စ သည်ဖြင့်ဖွဲ.စည်းထူထောင်ခွင့်ရှိစေရမည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများကွဲပြားမှု ပဋိပက္ခသည် ၄င်းလူမှုရေးအဖွဲ.အ စည်းများကိုမထိခိုက်စေရန် ခိုင်မာသောမူဝါဒဖြင့် အစိုးရကိုယ်တိုင်ကူညီထောက်ပံ့ရမည်။
အလုပ်သမားအစည်းအရုံး၊ တောင်သူလယ်သမားအစည်းအရုံး၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအ စည်းအရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအဖွဲ.အစည်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနနှင့် စာကြည်.တိုက်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ.များ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်ကူညီသော အသင်းအဖွဲ.များ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ စည်တို.သည်ပါတီနိုင်ငံရေးနှင့်သီးခြားကင်းလွတ်စေရမည်။
၈။ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် လွတ်လပ်သော ဈေးကွက်စီးပွားရေး၊ ပုဂ္ဂလိက ကုန်ပစ္စည်းထုပ်လုပ်ရေး ပုဂ္ဂ လိကနှင့် နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက- အစိုးရဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက- အစိုးရနှင့် နိုင်ငံ ခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း၊ အစိုးရအချင်းချင်း ဖက်စပါလုပ်ငန်း၊ သမ၀ါယမလုပ်ငန်း၊ အစိုးရမှ တာဝန်ယူရသောစီး ပွားရေးကဏ္ဍဟူ၍ အသီးသီးရှိမည်။
၉။ ၄င်းတို.အတွက် မူဝါဒချမှတ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါတီ၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုခြင်း၊ ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုခြင်းတို.ကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကိုသာ ရှေးရှုသည်.လုပ်ငန်းစဉ်များ အဖြစ် ခေတ်မီမီသုံးသပ်ဆွေးနွေး၍ တိုင်းပြည်သို.တင်ပြရမည် ။ အစိုးရကပါဝင် စွက်ဖက်ခြင်းမရှိသင့်သော ပုဂ္ဂလိ ကပိုင်းဆိုင်ရာ ကုန်ထုပ်ရောင်းဝယ်ဖြန်.ဖြူးခြင်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်းသို.သာ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်စေမည်။ အများပြည်သူအသုံးပြုလုပ်ငန်းများကိုအစိုးရကပါဝင်ဆောင်ရွက်စေမည်။
၁၀။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံပိုင်သိမ်းပိုက်ခြင်းမပြုစေရ။ နိုင်ငံသုံးငွေကြေးတည် ငြိမ်မှုနှင့် အာမခံချက်ကို အစိုးရကတာဝန်ယူစေရမည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို ဖိတ်ခေါ်အားပေးရ မည်။ ၄င်းတို.အတွက်အခွင့်အရေးများကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးမည်။
၁၁။ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် သည်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရေးစနစ်ကိုပြဌန်းဆောင်ရွက်ေ စေမည်။ ပညာရေးစနစ်တွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်းဆိုင်ရာပညာသင်ကြားရေးကများကိုအစိုးရပညာရေးစနစ်နှင့်ညှိ နိုင်းဆောင်ရွက်စေမည်။ မူလတန်းအဆင့်သည်အခမဲ.မသင်မနေရဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသင်ရိုးနှင့် သင်ထောက်ကူများကို ပြည်.စုံစေမည်။
၁၂။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍကို နိုင်ငံတကာအဆင့်သို.ရောက်အောင်တည်ဆောက်မည်။ လူ တိုင်းအခမဲ.ဆေးဝါးကုသခွင့်အတွက်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖေါ်မည်။ အမျိုးသားကျန်းမာ ရေးမူများချမှတ်ပြီး ပြည်သူ.ကျန်းမာရေးစနစ်ဖြင့်ကျေးလက်ဒေသ၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တောင်တန်းဒေသများ ပါမကျန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရစေရန်ဆောင်ရွက်မည်။ အခြားသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြည်တွင်း အဖွဲ.အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ.အစည်းများကို အားပေးလက်ခံမည်။
၁၃။ ကိုယ်တိုင်လယ်လုပ်သူများအပါအ၀င် အခြားမြေယာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင် သူများအတွက် လယ်ယာမြေအပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိကမြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်နှင့်အ ညီ ပြောင်းလဲခွင့်၊ အမွေပေးခွင့်၊ ရောင်းချပေါင်နှံခွင့် စသည်.အခွင့်အရေးတို.လည်းရှိစေရမည်။ လယ်ယာ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဧရိယာအကျယ်အ၀န်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချုပ်ချယ်ကန်.သတ်မှုများကို ခေတ်စနစ်ပြောင်းသည် နှင့်အညီပြောင်းလဲပေးရမည်။ လယ်ယာမြေများ ခေတ်မီတိုးတက်သောနည်းစနစ်နှင့် ဖွံ.ဖြိုးစေရန် အစိုးရက ထောက်ပံ့ကူညီမည်။ အစိုးရသည်စီမံကိန်းချသည်.နည်းဖြင့် အဓမ္မမကျင့်သုံးပဲ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဈေးနှုန်းအတက်အကျနှင့် နိုင်ငံခြားဝင်လည်းပိုမိုရရှိစေနိုင်မည်. သီးနှံများကို စိတ်ကြိုက်စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အား ပေးကူညီမည်။
၁၄။ ခေတ်မမီတော့သော လယ်ယာမြေဥပဒေများကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်။ ပယ်ဖျက်သင့် သည်များကိုပယ်ဖျက်မည်။ ပြင်ဆင်သင့်သည်များကိုပြင်ဆင်မည်။
၁၅။ တပ်မတော်ထူထောင်ဖွဲ.စည်းတည်ရှိရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၆။ နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးနှင့် ဖွံ.ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူ.အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင် လည်းတပ်မတော်သည် ပြည်သူတို.နှင့်အတူတကွ လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေမည်။
၁၇။ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများ ချမှတ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရာတွင် မိမိတို.နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကိုမထိခိုက်စေရ။
(က) ကုလသမဂ္ဂ၏ အခြေခံမူဝါဒများ၊
(ခ) ငြိမ်းခြမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒ (၅) ချက်၊
(ဂ) လွတ်လပ်၍တက်ကြွသော နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၊
(ဃ) မူဝါဒ၊ ရည်ရွယ်ချက်တူညီသော နိုင်ငံတကာအဖွဲ.အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊